AC Milan ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo goolhayaha 29 jirka kooxda Liverpool ee dalka Spain Pep Reina. Sida ay qortay Daily Mail.
Barcelona ayaa dooneysa difaac cusub iyadoo diiradu u saaran tahay difaaca Arsenal Thomas Vermaelen oo 26 jir ah, kabtanka Manchester City Vincent Kompany oo isna 26 ah, iyo difaaca soo jiitay indhaha kooxo waa weyn David Luiz oo 25 jir ah, sedaxdaas difaaca ayaana liiska ugu jira kooxda reer Spain hadii ay la soo saxiixan waayaan ciyaaryahanka koowaad ee diirada u saran 23 jirka Athletic Bilbao Javi Martinez. Sida ay qortay Daily Mirror .
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Manchester City Nigel De Jong oo qandaraaskiisa Etihad Stadium ay uga harsan tahay hal sano ayaana sheegay inuusan aqoon halka uu mustaqbalkiisu ku dambeyn doono, inkastoo uu si maldahan u sheegay inuu doonayo inuu la sii joogo kooxda heysata horyaalka Premier League, sida ay qoreyso The Sun.
Madaxweyne ku xigeenka kooxda AC Milan Adriano Galliani ayaana gaashaanka u daruuray qorshaha ay kooxdiisu England uga soo dhaqaajineyso weeraryahankii hore ee kooxda Inter Milan Mario Balotelli oo 21 jir ah sida ay qortay Talksport .
Sunderland ayaa isha ku heysa Louis Saha oo 33 jir ah iyagoo doonaya inay lasoo saxiixdaan weeraryahankaan oo si xor ah uga tegaaya Tottenham, waxaana sidoo kale looga gacan haatinayaa Bariga Dhexe. Sida ay qoreyso Daily Mirror.
West Ham United ayaa mar kale isku deyeysa inay Norwich City ka dhaadhiciso 5.5 million oo ginni oo ay ku dooneyso Grant Holt oo 31 jir ah ka dib markii laga soo diiday 3 million oo ginni sida ay qortay Then sun.
Newcastle ayaa diyaar u ah inay heshiis ku kacaya 9 million oo ginni u soo bandhigaan FC Twente oo ku aadan weeraryahankooda Luuk de Jong oo 21 jir ah laakiin waxay ku guuldareysteen 26 jirka Lille uga ciyaara difaaca garabka midig ee Mathieu Debuchy sida ay qoreyso Daily Mail.
Clint Hill oo 33 jir ah ayaa Hal sano oo heshiis ah u saxiixay kooxda QPR xilli uu diirada u saarnaa kooxda Leeds United sida ay qortay The sun.
Tottenham ayaa wadahadalo toos ah ah la yeelatay tababarihii hore ee Chelsea Andre Villas-Boas, waxaana ay ku dhow yihiin inay u soo bandhigaan heshiis uu ku bedelayo Harry Redknapp sida ay qoreyso Guardian.